उच्च गुणवत्ता निःशुल्क क्र्याक ब्रश प्याक | क्रिएटिव अनलाइन
उच्च गुणवत्ता निःशुल्क क्र्याक ब्रश प्याक
La बनावट यो हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा चाखलाग्दो कार्यहरू मध्ये एक हो। यो ती मध्ये एक प्रभाव हो जुनमा ग्राफिक डिजाइनर र फोटोमानिपुलेटरको गुणस्तर र रचनात्मक सम्भाव्यता प्रदर्शन हुन्छ। भाग्यवस, हामीसँग उपकरणहरूको सेट छ जुन हाम्रो कार्यलाई अधिक सजिलो बनाउँदछ। यस प्रकारको काममा ब्रशेस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र त्यस्तो तत्व हुन सक्छ जुन बाहिर गरिएको काममा भिन्नता गर्दछ। आज म तपाईंसँग क्र्याक ब्रशेसको अत्यन्तै पूर्ण र उच्च-गुणस्तरको प्याक साझा गर्न चाहन्छु, लागू गर्नको लागि सही ग्रुन्ज वा स्वर्गीय कम्पोजिटहरू र कडा तत्वहरू, जस्तै पर्खाल वा रूखहरू। ती पात्रा मास्कहरूको प्रयोग गरेर हाम्रो चरित्रको अनुहारमा विशेष प्रभावहरू सिर्जना गर्न पनि चाखलाग्दो हुन सक्दछन्। सम्भावनाहरू धेरै व्यापक छन्, तपाईंसँग रचनात्मक सम्भावनाहरूको विशाल सीमा छ। यो तपाईं प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छमा निर्भर गर्दछ!
यस क्षणको लागि मैले तपाईंलाई यहाँ तल प्याकेज छोड्दछु जुन तरिकामा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ र यी क्र्याकहरू र ब्रेकहरूको कुल नौ सुपर यथार्थिक मोडहरू छन्। तपाईं यो पाउन सक्नुहुन्छ तलका लिंकमा संकुचित ढाँचामा। यदि सामग्री पहुँच गर्दा त्यहाँ कुनै समस्या छ भने, तपाईंले हामीलाई तल एउटा टिप्पणी छोड्नु पर्छ। यहाँ प्याकेजमा समावेश गरिएका प्रत्येक ब्रशेसको नमूनाहरू छन्। अधिक भन्नु भन्दा, म आशा गर्दछु तपाईंले उनीहरूलाई रमाईलो गर्नुहुनेछ र उनीहरूबाट राम्रो प्रदर्शन पाउनुहुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » ब्रशेस » उच्च गुणवत्ता निःशुल्क क्र्याक ब्रश प्याक
म यसलाई डाउनलोड गर्न सक्दिन ????
Nandorc लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, लिंकले तपाईंलाई डिभिएन्टार्टमा लैजान्छ र त्यहाँ तपाईं पृष्ठको दायाँ पट्टि डाउनलोड बटन भेट्टाउनुहुनेछ। शुभकामना!
अब हो, धन्यवाद !!!
इन्फोग्राफिक्सहरू सिर्जना गर्न श्रोत र टेम्पलेटहरूको प्याक
१० धेरै रोचक प्लगइनहरू एडोब इलस्ट्रेटरको लागि